Tsy ilay mamizana be akory no atao, fa dia an-tongotra lavidavitra, lomano, “yoga” na “pilates” no ampiasain’izy ireo hanafainganana ny fihetsehan-jaza. Ny tena idealy indrindra aza, araka ny nambaran’izy ireo, dia ny miray ara-nofo.
Ny tanana, ny lohalika na ny tongotra no mipetaka amin’ny tany eto. Io fipetraka io, araka ny fanazavan’ireo vehivavy fahiny, dia manosika ny zaza hisava lalana. Azo averimberina im-betsaka, araka izay hitiavana azy.
Sady mandeha no mitingitingina. Tsara kokoa raha misy olona mitazona eo am-panaovana an’ity fihetsika ity sao mianjera.
Manamafy ny hozatry ny lamosina, ny fitombenana ny “balle en caoutchouc”. Manampy ny zazakely amin’ny fikarohana ny lalana hivoahana ihany koa izany. Mipetraka eo ambonin’ilay “balle” dia efa mety. Na koa iankinanana ilay “balle” ka ny tongotra ihany no mitazona mipetaka amin’ny tany.
Tsy maintsy olona manam-pahaizana amin’izany anefa no manao ny otra. Saropady be mihitsy mantsy ny vatan’ny vehivavy bevohoka sy ilay zaza ao an-kibony.
· Potserina mafy ny faritra iray eo alohan’ny vody tongotra. Tsy atao marary. Fantatra fa manalefaka ny fanaintainana re rehefa miteraka ihany koa io faritra io ankoatra azy manosika ny fihetsehan-jaza
· Potserina ny afovoan’ny ankihiben’ny tanana 2 ary tazonina mandritra ny minitra vitsy.
· Potserina ny faladia, anelanelan’ny ankihiben-tongotra sy ny fanondron-tongotra. Somary malefaka io faritra io rehefa tsapaina.